Beddelida Nolosha - Qaybta Oakleigh ee Carruurta u Baahan Tartan. - Dugsiga Oakleigh iyo Xarunta Waxqabadka Sanadaha Hore
Booska Maamulaha Dugsiga ee ka banaan Dugsiga Oakleigh
La daabacay: 16 November 2020
13-kii Nofeembar, waxaan ku imid dugsigeenna xamaasad iyo xiise badan oo aan sugi kari waayey bilowga munaasabaddeena Helitaanka Dhaqaajinta gargaarka Carruurta Baahan.
Mawduuca ugu weyn ee diiradda la saaray sannadkan Carruurta Baahan ayaa ahaa in la dhiirrigeliyo oo loo tartamo samaqabka iyada oo la sahaminayo iyo 5 Ways to Wellbeing in the country
Ma ahayn inaan ka fikirno wax badan si aan go'aan uga gaarno annaga, qof kasta oo halkan jooga Oakleigh waxaan dooneynay inaan kaqeybqaadan dhacdadan. Ku xirnaanta, firfircoonida, awood u lahaanshaha barashada; Caawinta dadka kale iyo qaadashada ogaysiiska - dhamaan 5taan dariiq ayaa aasaasiyan muhiim u ah dhamaan caruurta iyo qoysaskooda iyo dhamaanteen, shaqaalaha Oakleigh.
Waxay ahayd mid qalbi kululeysa inaad aragto inbadan oo naga mid ah, dadka waaweyn oo ku lebisan huruudyo isla markaana ku daboolan baro. Carruurtu waxay ku yimaadeen midabbo kala jaale ah, dhibco iyo baro dillaac ah iyo wajiyo meel walba lagu arkaayey.
Si sax ah saacada 10, waxaan bilownay kalfadhigeenii Guuritaanka iyo Grooving Zoom oo ay martigalisay Class Yellow iyo waxa qaraxan aanu qabnay. Fasallo badan iyo carruur ayaa nagu soo biiray iyo bartamihii qufulkii labaad ee qaranka markii ay ahayd inaan bulsho ahaan iyo jidh ahaanba ka fogaanno - maxay hadiyad ahayd oo ahayd inaan ku xirno shaashadda oo aan wadaagno daqiiqado baashaal, wada-firfircoonaan. Si aan u arko falcelinta carruurta markay arkeen qaar ka mid ah saaxiibadood oo fasal kale wadaagaya isla markaana wadaagaya daqiiqad - waxaan dareemayaa inaan runti ku abuurnay daqiiqado sixir ah oo ku dhex jira kala tag.
Caruurtu way dheesheen wayna dhaqaaqeen oo way jeexjeexeen waxaanan soo aruurinay qadar £ 43.60 taas oo wax ku biirisay wadarta guud ee wadanka oo ahayd £ 41 milyan.
Waxaan dareemay sharaf, waxaan kuqanacsanahay kaqaybqaadashada iyo fududaynta iyo taageerida caruurteena 'inay noqdaan isbedelka aad rabto inaad ku aragto aduunka'.
2022 Oakleigh School & Xarunta Sanadaha Hore